Nayakhabar.com: भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध मुख खोलिन् मनिषा कोइरालाले
भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध मुख खोलिन् मनिषा कोइरालाले
चीन र भारत जस्ता ठूला देशबीच रहेको नेपालले दुवैतिर सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न नजानेको कुरा आउने गरेको छ । नेपालले नजानेकै हो त ?
– नेपालीले नजानेको होइन । यो विषयमा विज्ञहरु पनि जानकार छन् । सन्तुलनमा जान सजिलो पनि छैन । हामीले एक/दुईवटा कुरा ध्यान दिनैपर्छ–छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन । त्यसलै कसरी उनीहरुसँग आत्मसम्मानसाथ अघि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपालीले केही गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।
यो विषयमा हाम्रा छिमेकीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सानो र गरिब छ भन्दैमा दबाउन खोज्नु पनि भएन । हामीले पनि छिमेकीलाई कसरी खुसीसाथ रहन सक्छौ, त्यो खोज्नुपर्छ । किनभने हामीसँग विकल्प पनि छैन ।
भारतसँगको सम्बन्ध जहिले पनि शंकाको अवस्थामा रहन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट पार पाउने उपाय के हो जस्तो लाग्छ ?
– म यो विषयको विज्ञ होइन । लामो समय भारतमा बस्दै आएकी छु । भारती जनता सधै नेपालको पक्षमा रहँदै आएका छन् । भूकम्प गएको समयमा हजारौं मानिसले व्यक्तिगत स्तरमा मलाई एप्रोच गरे । कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर । उनीहरु मायाले आएका हुन् ।
नेपालको नेतृत्व पनि परेको बेला भन्न सक्नु पर्यो, कृपया हाम्रो सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रतालाई ओभरराईट नगरिदिनूस भनेर । तपाईहरुलाई हामी सम्मान गर्छौं । माया गर्छौं र हाम्रोमा ठाउँ पनि दिन्छौं । तर हामी आत्मसम्मानका साथ बाँच्न चाहन्छौं । किनभने आत्मसम्मान जीवनको सबैभन्दा आधारभूत कुरा हो । दबेर बस्न सकिँदैन । तर यस्तो कुसरा राम्रोसँग सञ्चार गर्न आवश्यक छ । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित कोइरालासँगको अन्तर्वार्ताबाट